U-ARMIE HAMMER UPHANTSI UKWENZA 'INDODA ESUKA EUNCLE' NGOKULANDELELANA - ISANDO SEARMIE
J K Ukurola
I-Armie Hammer isezantsi yokwenza iNdoda esuka kwi-UNCFE ngokulandelelana kweFanfic ngoko ke yiya kuyo
U-Armie Hammer uthe ukuba umntu ubhale ubumnandi obuhle kakhulu Indoda Evela eU.N.C.L.E , wayeqinisekisa ukuba uGuy Ritchie uyayibona ukuze bakwazi ukwenza enye into. KAKHULU UFUNA IZIBHENO?
Indoda Evela eU.N.C.L.E yayiyintlola yomdlalo weqonga ka-2015 ekhokelwa nguGuy Ritchie kwaye isekwe kwimiboniso ye-1960s enegama elifanayo. Ukulandela uNapoleon Solo (uHenry Cavill) kunye no-Illya Kuryakin (uHammer) kwimishini yabo eyimfihlo, bobabini baqala njengeentshaba kwaye baqala ukusebenza kancinci ukukhusela uGaby Teller (Alicia Vikander) kwiphulo lakhe lokufumana utata wakhe.
UMASIPALA iphele ngendlela ebimiselwe ngokulula ukwenza enye inkqubela phambili (njengoko imishini nganye entsha inokwahluka ngokupheleleyo), kodwa ifilimu ayizisanga iinombolo zebhokisi yeofisi ezazifunwa zii studio. (Yenze i-110 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela.) Kodwa imovie iye yaba yinto eyintandokazi kubalandeli. Kakhulu kangangokuba amaxesha amaninzi ngonyaka apho abantu beza nefilimu kwi-Twitter, Tumblr, nakwezinye iindawo zentlalo ukuze babelane ngothando lwabo oluhlala luhleli. Ubumnandi bemovie, obunxibe iimpahla ezimnandi kunye nezicwangciso ezinomdla, waziboleka kwii-gifs, kwaye iinkwenkwezi ezintle nezinomtsalane azizange zenzakalise. Indoda Evela eU.N.C.L.E ivelise i-fandom enomdla ngokulandelayo esasebenza nanamhlanje.
Ukuthetha no Umhlanganisi , Inkwenkwezi u-Armie Hammer wayesabonakala enomdla malunga nombono wokulandelelana kwaye ehlekisa ecela iingcebiso malunga nokuba ifilimu ingaya phi.
Ndingayenza enye iNdoda evela e-UNCLE ukubetha kwentliziyo. Njengokubetha kwentliziyo. Ukuba umntu ubhale iqhekeza elilunge kakhulu le-fanfic, bendiyibalisa. Ukuba umntu othile ubhale isiqwenga esihle kakhulu somntu othanda ukuba fanfic, ndiza kuqinisekisa ukuba ifikile 'kuGuy noLionel [Wigram, umvelisi] kwaye babe ngathi,' Nina bantu nifanele niyifunde le nto, emva koko ninike lo mntu ityala lokubhala, ' kuba masenze le movie yenziwe, masenze oku.
Ke… u-Armie Hammer ufuna nje ukuba sibhale phantsi ezinye zeempendulo kwaye siqala ukumfaka kwi-Twitter? Ngenxa yokuba ndiya. Kudala ndikhala ngale ndlela ilandelayo kangangexesha elithile kwaye ndiza kuyibhala le nto kwaye ndiqale ukumakisha wonke umntu obandakanyekayo. Ndiyayithanda kwaye ndiyayicaphukela imbono yokubeka le nto kubalandeli.
Ewe, iHammer iyadlala (… ngaphandle kokuba), kodwa impendulo yethu kwangoko yayiqale Ukuba umntu othile ubhale isiqwenga esihle kakhulu sefeni? Sele kukho imfumba efanelekileyo. Okwangoku, zingaphezulu Iziqwenga ezingama-3,000 zothando ngo-2015 Indoda Evela eU.N.C.L.E koVimba waBethu kwaye amanani ayanda. Nokuba umboniso wokuqala weTV uneetoni zefics eziphefumlelweyo kwaye zazine-fandom kwi-Intanethi ukusukela ekuqaleni kwe-intanethi.
Kodwa le mpendulo ehlekisayo indixelela ukuba kukho umdla wokwenyani ovela kubalingisi ekwenzeni enye into, emnandi ukuyiva. Ixesha elininzi, xa into enje iziswa ngaphandle kwento ecacileyo yokubona isikhonkwane, umdlali weqonga unokuphambuka okanye enze okungaphenduliyo ngako. Ngaba u-Armie Hammer wonwabile malunga nethemba lokubuya azodlala u-Illya Kuryakin kwakhona, kwaye ngokungafihlisiyo esithi uyakunceda ukuyityhalela? Oko kusinika umlinganiselo othile wethemba.
Lo ngomnye umzuzu apho singathanda ukulibonisa igalelo lotshintsho kubalandeli. Kwaye inyani yokuba uHammer uziva ekhululekile ukukhwaza abalandeli kunye nefriji ebonisa ukuba kuninzi kangakanani ukuqonda okukuyo kule mihla. Kwaye ngumdlandla wabalandeli-ukubhala iifics, ukwenza i-memes, i-meta, ubugcisa, iividiyo, nokunye-okunokugcina uphawu luphile kwaye lubonakalise umdla oqhubekayo kunye nemfuno. Kananjalo, onke amahlaya ecaleni, kukho imisebenzi yentshutshiso kule kunye nezinye iifandom ezinamabali kunye nokubhala okugqwesa ngokulula oko sikufumanayo kwimiboniso bhanyabhanya yamanyathelo amakhulu. Armie, sinesimemo se-AO3 ukuba uyasidinga.
(umfanekiso: Warner Bros.)
Ngaba ufuna amanye amabali anje? Yiba ngumbhalisi kwaye uxhase indawo!
-UMary Sue unomgaqo-nkqubo ongqongqo ongavumiyo, kodwa ungaphelelanga apho, ukuthukwa kwabantu nabani na , Intiyo nentetho egonyamelayo. —
URick kunye noMorty Recap: Umxube weRicklantis
Ukudada Kwabantu Abadala
Izinto Esizibonileyo Namhlanje: Ixesha elide elilindelwe kwi-Star Trek: I-DS9 yoXwebhu iya kufika kwiithiyetha ngobunye ubusuku ngoMeyi
Inkwenkwezi Ihamba Indawo Enzulu Esithoba
Iigwababa zezona Zona ziNgcono zeNetflix's Shadow kunye neBone kwaye yiyo iNyaniso
Ukwenza ngokuLungileyo: Wreck-It Ralph Efumanekayo koKhuphelo ngaphambi kweDVD kunye neBlu-Ray
UJohn Oliver ucacisa ukuba kutheni iiNkundla zoFuduko ziMyalezo oGqibeleleyo kwiveki ephelileyo ngokuhlwanje
Usuku Lokufa Olumnandi 2U
URodham sisiQwengana esiMangalisayo se-AU fanfiction sajika inoveli yezopolitiko
IMarvel Avengers Academy yazisa ngoNyaka oVulekileyo kwiGay
Kutheni le nto aMadoda bekhomba imipu kwiiDick zabo ukuba babe neeLib?
ukubuya kwejedi bernie sanders
steven iphela idayimane emhlophe ityhila
Kutheni kukhonjwe iminqwazi yamagqwirha
Inkundla yentenetya ye-burj al arab
waluigi super smash bros ekugqibeleni